सरस्वतीको सम्झना !! [ती दिनहरु] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सरस्वतीको सम्झना !! [ती दिनहरु]
२०७७ फाल्गुन १, शनिबार ११:२० गते
यसवर्षको सरस्वती पूजा यही महिनाको फागुन ४ गते मङ्गलबारका दिन परेको छ । सरस्वती पूजा आफैँमा भावनात्मक ऊर्जा प्रदायक विशिष्ट आस्थासूचक शब्द छ । यस पर्वसँगको आस्था र महिमाको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने सहज ठाउँ व्यक्तिले जन्म लिएको घर हो ।
त्यसैले, विद्यार्थीको निम्ति घरपरिवार र त्यसका सदस्यहरुले गर्ने व्यवहार बढी अर्थपूर्ण हुन्छ । घरभित्रको यस्तो महाविद्यालयलाई नियम र नीतिको बाटोमा डो¥याउन हाम्रा वैदिक विद्वान् पूर्वजहरुले ‘सरस्वती’ नामक देवीको प्रादुर्भाव गराए ।
हरेक मान्छे कुनै न कुनै आस्थासँग जोडिएको हुन्छ । आस्थाबिनाको मान्छे हुँदैन । मान्छे आस्थासँगको अपनत्वले बाँधिएको हुन्छ । आस्थाले जीवनको गन्तव्यलाई निक्र्योल गर्दछ । पुग्ने कहाँ हो भनी लक्ष्य निर्धारण गराउँछ । भाग्यवान् व्यक्तिहरुको लक्ष्य सुन्दर हुन्छ र सोही लक्ष्यअनुरुप उनीहरुको आस्थाले जीवनचर्यालाई डो¥याउँछ ।
यस अर्थमा जीवन मार्गलाई सहज र असहज बनाउन मान्छेलाई हरसमय वरपरबाट धेरै किसिमका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष इसाराहरु प्राप्त भैरहन्छन् । सरस्वती आस्थाकी देवी हुन् । उनीप्रति जसको जति दृढ विश्वास र आस्था रहन्छ त्यति नै उनको आत्मशक्ति बढ्दछ ।
आजको युवापिँढीले कतिपय अवस्थामा ‘सरस्वती’को विषयलाई ज्यादै हलुकारुपमा लिएको देखिन्छ । ‘सरस्वती’ व्यक्तिको मथिंगलमा आस्था निर्माणको मनोचिकित्सा हो । यो मानव मनको केन्द्रलाई सहजरुपले शुद्धीकरण गरी सुन्दर भाव जगाउन अति आवश्यक विधि हो । शरीरलाई स्वस्थ राख्न डाक्टरले विभिन्न पौष्टिक खाद्य वस्तु सेवन गर्न सल्लाह दिन्छन्, तर हरेक मानिसको निम्ति शरीरभन्दा अझ मह¤वपूर्ण अर्को मस्तिष्कको निम्ति आवश्यक आहार उसले बनाएको उसको सुन्दर चिन्तन र आस्था हो । यस परिप्रेक्ष्यमा आस्था जीवन मार्गको दीपक हो ।
भाग्यवान् बालबालिकाहरुलाई उनका बौद्धिक बाबाआमाले विज्ञानसम्मत धारणाको बीजारोपण गराउन आस्थाकी देवी सरस्वतीसँग निकट राख्न प्रयास गर्दछन् । ‘सरस्वती’सँगको निकटताले बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कमा सन्तुलित जीवनको लागि मनोवैज्ञानिक चिकित्साको कार्य गर्दछ । यो विधि बहुतै सुन्दर छ । सरस्वतीको चित्रले जीवनका सबै आयामलाई प्रस्ट बोल्दछ । भाग्यवान् वैदिक सन्तानहरुको निम्ति यो अथाह सम्पति नै हो ।
‘सरस्वती देवी’ एउटा मनोविज्ञान विषयक अघ्याय हो । यस्तो गहन विज्ञानसम्मत विषयलाई अध्ययनको आरम्भबाट नै प्रस्ट भएर जान्नु र बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो आदर्श संस्कृतिको छेउटुप्पो नबुझीकन सतही सोचविचारमै रुढीवादीको बर्को ओढाई हलुका टीकाटिप्पणी गर्दै आलोचक बन्नु दुर्भाग्य हो भन्ने ठान्दछु ।
१. ‘सरस्वती’ मातृत्व र ममताको उद्गम हो । जीवनको उज्यालो केवल मातृत्वको काखबाट मात्र थालनी हुन सक्छ भन्ने मान्यताको आधारमा सरस्वती नारीरुपमा प्रस्तुत गरिएकी हुन् । मातृत्व पठित र ज्ञानमय हुन सके उनका सबै सन्तान निसंकोच सुखमय जीवन जिउन सक्दछन् ।
२. सरस्वतीको शीरको ताज ज्ञानधनको प्रतीक हो । ज्ञानले सम्पूर्ण संसार सुखमय हुन मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।
३. सरस्वतीको शृङ्गारले ज्ञानप्राप्तिबाट हुन सक्ने प्रत्येक व्यक्तिको सुखमय जीवनशृङ्गारलाई प्रस्ट पार्दछ ।
४. कमलपुष्प सरस्वतीको सिंहासन हो । जसरी हिलोमा पुष्पित कमल फूलले सबैको आँखामा सुन्दर प्रभाव पार्न सक्दछ त्यसरी नै जस्तोसुकै घरपरिवारबाट शिक्षित र दीक्षित व्यक्तिले पनि उसभित्रको ज्ञानले सबैलाई साथ दिन सक्दछ ।
५. सरस्वतीको वाहन श्वेतहंस हो । हंसले राम्रो र नराम्रो गुणलाई सहजै छुट्टयाउन समर्थ हुन्छ । मान्छे ज्ञानले भरपूर हुनसके उसभित्रको आँखाले पनि उचित र अनुचित ठम्याउन सक्दछ भन्ने यसको मूल आशय हो ।
७. सरस्वतीको हातमा वीणा (गितार) छ । ज्ञानामृतले भरिएको मान्छे र उसको जीवन सङ्गीतमय बन्न सक्छ । जीवनको तारलाई मिलाउन र व्यवस्थित गर्न सकिए जीवन रसमय हुन्छ । ज्ञानी मान्छेले सबैको जीवनमा मीठो सङ्गीत र अमृत सञ्चार गराउन सक्छ ।
८. सरस्वतीको हातमा पुस्तक छ । यसले हरेक व्यक्तिको जीवन एउटा पृथक् पुस्तक हो भन्ने बताउँछ । जब व्यक्ति बोल्न, हिँड्न र विचार गर्न सक्दछ तब उसको जीवनका प्रत्येक पृष्ठहरु लेखिन थाल्दछन् । जीवन पुस्तक सुन्दर बनाउन ज्ञानको किरण अवश्य चाहिन्छ । मान्छेको सोच र उसले बनाएको आस्थाअनुसारको जीवन बन्ने भएकोले जीवनचर्याअनुसारको पुस्तक निर्माण हुनेमा कुनै शङ्का रहेन । सुन्दर जीवनका कथा लेखिएका व्यक्तिका सुन्दर पुस्तकले जीवन स्वाभाविकरुपले सुन्दर बनाउन सकिन्छ । सुन्दर जीवनका निम्ति सरस्वती माताको चरणमा आफ्नो अन्तस्को भावलाई जोड्न सक्नुपर्दछ । मान्छेले आफ्नो भावलाई ‘सरस्वती’सँग जोड्न बाल्यावस्थादेखि नै मनको प्रचुर अभ्यासको जरूरत पर्दछ । त्यसैले, वैदिक संस्कृतिमा सरस्वती पूजन अथवा वसन्त पञ्चमीको पावन पर्वलाई विद्यार्थीको पर्वको रुपमा चर्चा गरिएको हो ।
९. सरस्वतीको हातमा एक सय आठ दानाको सग्लो माला छ । राम्रो खानपान र आहारविहारले व्यक्तिको समूल जीवनलाई एक सय आठ वर्षसम्म स्वस्थ भई सुखमय जीवन जिउन सक्ने शक्ति प्रदान गर्दछ ।
१०. सरस्वतीको वस्त्र सेतो छ । श्वेत वस्त्र सादगीपूर्ण जीवनको सङ्केत हो । जीवनलाई कुनै पनि धब्बा र दागले कुरुप बनाउने भएकोले प्रत्येक मान्छे पर्याप्त होसमा रहन सक्नुपर्छ भन्ने यसको आशय हो । सरस्वतीको निम्ति गरिने प्रार्थनामा जीवनका निम्ति आवश्यक सुन्दर प्राप्तिको अपेक्षा गरिएको छ ।
‘सरस्वती मया दृष्टा
विदादानं करोतु मे ।।’
अर्थात् ‘मैले देख्दै गरेकी वीणा र पुस्तक धारण गरेकी, हाँसको वाहनमा बसेकी सरस्वतीले मलाई ज्ञान प्रदान गरुन् ।’
वसन्त पञ्चमी सङ्गीतकी प्रतिरुप सरस्वतीको पूजाआराधना गरी मनाइने विद्यार्थीका निम्ति एउटा विशेष पर्व हो । सरस्वतीको पूजा केवल कर्मकाण्डको नियमभित्र मात्र सीमित रहनुहुँदैन । उनको पूजाले व्यक्ति स्वयम्लाई पुज्य बनाउन सक्नुपर्दछ । पूजापश्चात् यदि व्यक्ति पूज्य बन्न सकिँदैन भने पूजा कार्यरुपमा उत्रिन सकेको छैन भन्ने जान्नुपर्दछ ।
यसैदिनबाट क्रमशः वसन्त ऋतुको सुरूआत हुन्छ । यसले हिउँदको मुटु छेड्ने जाडो र तुषारोको ठिहीबाट वातावरणलाई न्यानो बनाउँदै क्रमशः कोइलीको कर्णप्रिय स्वरसङ्गीत श्रवण गराउँदै यस धरतीमा वसन्त ऋतुको आमन्त्रण गर्दछ । वसन्त ऋतु शिशिर ऋतु र गृष्म ऋतुको बीचमा आउने ६ वटा ऋतुहरुमध्येको सबैभन्दा मनमोहक ऋतु हो । वसन्तले यौवनावस्थाको जनाउ गर्दछ र यस ऋतुले प्रकृतिलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउँछ ।
वैदिक संस्कृतिको महान् ग्रन्थ गीतामा भगवान् श्री कृष्णले अर्जुनलाई ‘म ऋतुहरुमा वसन्त ऋतु हुँ भनेका छन् । पौराणिक तथा आधुनिक कविहरुले पनि वसन्त ऋतुमाथि सयौँ कविताहरु लेखेका पाइन्छन् । वसन्तमा न गर्मी न चिसो । ठिक्कको सन्तुलित मौसम हुन्छ । प्रकृतिले नौलो काँचुली बदल्छ । महिनाहरुको २ महिना चैत्र र वैशाख महिना वसन्त ऋतुभित्र पर्दछन् । वसन्त ऋतु सबैभन्दा राम्रो, रमाइलो र मनमोहक ऋतु हो । वसन्त ऋतुमा सबै उदाङ्ग र उजाड बोटबिरूवाहरुले नयाँ पात फेर्दछन् । वसन्त ऋतु हरियाली ऋतु । यो ऋतुलाई सबैले मन पराउँछन् । त्यसैले, यस ऋतुलाई ऋतुराज पनि भनिन्छ ।
वैदिक सनातन संस्कृतिमा सरस्वती पूजाका सम्बन्धमा अत्यन्त व्यावहारिक आयामहरु छन् । ब्रह्मावैवर्त पूराणमा प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ कि विद्या, कला, शब्द, विज्ञान अनि विचारकी देवी सरस्वतीलाई सम्झना गर्दै पूजा गरिन्छ । बिहानै उठेर प्रातः स्नान पश्चात् चोखोनीतो गरी सफा कपडा लगाएर कलश स्थापना गरिन्छ अनि क्रमशः गणेश, विष्णु, शिव आदि देवताहरुको अर्चना गरिन्छ र सूर्यको अर्चनासहित सरस्वतीको उपासना गरिन्छ ।
विद्यालयहरुमा यो पर्वको विशेष रमझम हुन्छ । विद्यार्थीहरुको सक्रियतामा संयुक्त प्रसादको व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ । विभिन्न रङ्गका रङ्गीन तोरणहरु झुन्ड्याएर, साल, बरपीपल र उखुका पातहरुसहित केराका थाम अडाएर बाँसको प्रयोग गरेर बनाएको प्रवेशद्वारहरुबाट विद्यालय सजिसजाउ गराइन्छ ।
विद्यार्थीहरुका लागि यसको अर्को रौनक भनेको यसदिनमा विद्यालयको दैनिक पोसाकबिना नै विद्यालयमा प्रवेश गर्न पाउनु हो । फरक—फरक पोसाकमा उपस्थित भएका विद्यार्थीहरुको जमघटले विद्यालयको पूरै परिसरलाई नै उत्सवमय तुल्याउँछ ।
नेपालको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने हामी नेपाली साँच्चीकै सानो परिवेशमा बाँचेका भने पक्कै छैनौँ । नेपाल अधिराज्यभरिका धेरैजसो विद्यालयहरुमा कहीँकतै सानो या ठूलो सरस्वतीको मन्दिर रहेकै हुन्छ । सरस्वती देवीलाई धर्म या संस्कारसँग भन्दा पनि विद्याप्रतिको आसक्तिका रुपमा हेर्न जरूरी छ । हामी जुनसुकै संस्कृतिका अनुयायी भए पनि हाम्रो विद्या र ज्ञानसँगको नाता भने एउटै हो ।
वसन्त पञ्चमीकै दिनमा हामीमध्ये धेरैले अक्षरारम्भ गरेका हुन सक्छौँ । अर्कोतर्फ यो दिन सर्जकहरुको दिन हो । तपाईं—हामी जुनै धर्म या संस्कृतिमा विश्वास भएका व्यक्ति किन नहोऊँ, तर ज्ञान हामी सबैलाई आवश्यक छ, सिर्जना र सर्जकको कदर हामी सबैले गर्न जरूरी छ ।
लेख्नेको मसी नसकियोस् । बोल्नेको आवाज दुरूस्त रहोस् । अनि, हेर्नेको नजर खुल्ला रहोस् । ‘क’ देखि ‘ज्ञ’सम्मका वर्णमाला अनि शब्द विन्यासहरुले हामीलाई ज्ञान अभिव्यक्त गर्दा सदैव साथ दिऊन् । ‘एबिसिडी’ आदिका अक्षरशः प्रयोग जारी रहोस् । व्याकरणले साथ दियोस्, सङ्गीतका सातै सुर अनि अभिनयका सम्पूर्ण रसहरुले साथ दिऊन् । मुख्य कुरा शृङ्गार—रसले जीवन भरिपूर्ण होस् । सरस्वती माताको जय !!